[Thursday, February 21st, 13] :: Waar dadka ha jahawareerinina
Dhaqane:waar kaalay ma hadaa sidii faqashtii dadka rabtaan inaa saddexda duhurnimo seexisaan
adeer waxaasi waa wixii laga dagaalamay ee dadka ka daaya.
Dhaashane:Nabadgelyada sidee loo sugayaa hadaan dadka la baadhin waayee?Ileyn waad ogtoo imika sidii hore maahee.
Dhaqane:Waar waxba ma ogine dadka saqdan dhexe ee guryaa ku jebinaysaan iyo gawaadhidan aa meel walba ku baadhaysaan joojiya adeer .Dadku ma baantuubaa sow dalkoodii ma joogaan .Hadaan dadku magaaladoodii nabadgelyo ku dhex mari karayn maxay sameeyaan ? Miyey idiinka tagaan dalka?
Dhaashane:Hada ninka sidaa u hadlayaa haduu maqlo meel yar baa la qarxiyeyna imakuu afka gacanta gelinayaa.oo odhanayaa dowladu xagay eegaysay markii meesha la qarxinayey?Waar adeerow nabadgelyada ma idiin ilaalinaa mise waa maya?
Dhaqane:Hada ninkaa waa ka dhab .Waxay isu haystaan inay iyagu nabadgelayada ilaalinayaan.oo ssdu dan spudan iyo waxan gaaladu u dhoobdhoobtay u haystaan inay nabadgelyo ilaalinayaan.Waar nabadgeliyada adeer dadkaa ilaashada .cid taa kuma haleeyaan e xaafadaa saqdan dhexee sidii faqashtii baadhaysaan ka joojiya adeer.oo dadkan aa magaaladoodii ku dhex baadhaysaan iyo dhaqan xumadani waa calaamadii faqashtee joojiya .Wadanada hareerihiina bal eega cid saq dhexe wax baadhaysa ama qoryo la waeegaysoon Soomaalia ahayen ma haysaan .Mise meel baasta waa isku darteen dee ?
Dhaashane:Adeer war ma hayside waa la isasoo galee aayar iska qayil aanu ku ilaalinee.
Dhaqane:Waar heedhe taan ku socdayba ilaaway .Oo intaa tidhaahdeen waxaanu samaynay barnaamij la yidhaa qiimee qofkaaga ,ayaa isla idinki uun biladii isu wada xidhxidheen .Inaar horta miyeydaan xishoon?
Dhaashane:Waar xishood haku meeraysaninee muuqda oo wax qabta .Biladaa ileyn bilaash laguma helee.
Dhaqane:Ilaahow kuwan bilad ha noogu dhiiban.Walaahi waan qoslay .Iyagii uunbaa intay bilado soo samaysteen hadana isu xidhidhay.Indho adagaa ma Kulmiyaa?